RASMI: Liverpool Oo War Naxdin Leh Ka Soo Saartay Dhaawacii Soo Gaaray Virgil van Dijk Shalay – Laacibnet.net
RASMI: Liverpool Oo War Naxdin Leh Ka Soo Saartay Dhaawacii Soo Gaaray Virgil van Dijk Shalay
Kooxda Liverpool ayaa ku dhawaaqday goor dhaweyd war naxdin ku ah taageerayaashooda iyagoo shaaciyay in Virgil van Dijk uu mari doono qaliin looga sameynayo jilibka ka dib dhaawacii shalay ku soo gaaray Goodison Park.
Daafaca dhexe oo saftay kulan walba oo Premier League ah mudadii uu joogay Reds ayaa dhaawac culus uu ka soo gaaray goolhayaha Everton Jordan Pickford qeybtii hore ee kulankii ku dhamaaday barbaraha 2-2.
Pickford ayaa ka badbaaday in casaan lagu siiyo qaladka madaama VAR aysan eegin qaladka iyagoo ku mashquulay inay eegaan kaliya in Van Dijk uu offside ahaa ka hor inta aan qaladka lagu gelin, madaama ay rigoore ahaan laheyd haddii uusan offside jiri laheyn.
War ay dhawaan soo saartay kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League ayaa lagu yiri:
“Virgil van Dijk wuxuu marayaa qaliin jilibka ah oo ka soo gaaray kulankii Sabtida ee aan barbaraha 2-2 la galnay Everton.
“Qaliinka ka dib, Virgil waxa uu bilaabi doonaa soo kabsashadiisa si uu u gaaro taam ahaansho buuxda sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaad soo laaban doontaa adigoo ka xoog badan sidii hore Virgil”
Liverpool wax waqti ah uma qabanin muddo uu ku soo laabanayo Virgil van Dijk laakiin dhaawaca soo gaaray iyo nooca qaliin uu marayo waxaala filayaa inuu maqnaado muddo bilo ah.
Wararka qaar ayaaba soo jeedinaya inay adkaan doonta in Virgil van Dijk uu dib danbe u dheelo xilli ciyaareedkan taasoo dhabarjab weyn ku ah kooxda Liverpool oo daafacooda uu adkeynayay Van Dijk.